ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseFrance I-Lucas Digne yobuntwana Ibali leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGlaus Genius eyaziwa kakhulu ngegama lesidlaliso "Luca". Ibali lethu leLucas Digne yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukusuka ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku. Uhlalutyo lubandakanya ubomi bakhe bokuqala, imvelaphi yosapho, ubomi bomntu, iinyani zentsapho, indlela yakhe yokuphila kunye nezinye izinto ezincinci ezaziwayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi ngokukwazi kwakhe ukuhlukumeza abo bahlaseli babanike izinto. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga i-Biography kaLucas Digne enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
I-Lucas Digne Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
Ekhohlo-ngasemva Lucas Digne wazalwa ngomhla we-20th kaJulayi 1993 eMeaux commune eFrance. Wayengowesibini kubantwana ababini abazelwe ngumama wakhe, uKarine Digne kunye noyise, uPhilippe Digne.
U-Lucas Digne wazalelwa kubazali okwaziwa kancinci ngaye. Ityala lemifanekiso: I-Francefootball.
Isizwe sase-France esingesosityalo sabadlali bobuhlanga abamhlophe abaneengcambu ezifihlakeleyo sakhulela eMeaux eFrance apho wakhula khona kunye nomntakwabo-Mathieu Digne.
U-Lucas Digne wakhuliswa e-Meaux commune eFrance. Ityala lemifanekiso: I-Francefootball kwaye WorldAtlas.
Ukukhula kwilizwe lakhe lokuzalwa eMeaux France, uDigne wanyathela ngeendlela zomntakwabo omdala uMathieu ngokudlala ibhola ekhatywayo. Ngelixa uDietne wayekuyo, wayexelela nabani na okhathaleleyo ukuba amamele ukuba uza kuba yingcaphephe kwezemidlalo kwaye abe nendlela efanelekileyo yokuqhuba inqaku lakhe.
I-Lucas Digne Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Njengoko u-Digne omncinci ehambele phambili ebudaleni nasebudaleni, umdla wakhe kwibhola waba yinto ebonakalayo. Ngethamsanqa, ubhaliso kwiklabhu yendawo uMareuil-Sur-Ourcq wamnika indawo eyoneleyo yokufumana umdla kwibhola ekhuphisanayo kwaye okona kubaluleke kakhulu, wathoba intetho yakhe malunga nokuba yingcali.
Ngexesha uD Digne wayeneminyaka eyi-9 kwi-2002, wajoyina iklabhu yasebumelwaneni, eCrepy-en-Valois apho engazange aphucule kuphela kubuchule obufunyenwe kwiminyaka eyi-3 yoqeqesho eMareuil-Sur-Ourcq kodwa wayehlala evulekile ekufundeni ngakumbi iziseko.
Ikhadi lesazisi likaLucas Digne eCrepy-en-Valois. Ityala lemifanekiso: I-Francefootball.
I-Lucas Digne Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala
Kwinqanaba lokudibana kwebhola likaDigne neCrepy-en-Valois, waba nzima ukungahoyi njengoko iinwele zakhe ezikhazimlayo zaba uhlobo oluthile lwophawu olwenza ukuba abantu abahlekisayo abavela eLille balandelele isikhundla sakhe esinomtsalane ngexesha lemidlalo yokhuphiswano.
Ke, i-12-eneminyaka ubudala yebhola ekhatywayo yaziswa kwinkqubo yolutsha yaseLille apho yaphakama khona ngenqanaba kwiminyaka elandelayo ye-5 ukuze ikhusele ukukhuthaza iqela leqela lokuqala. Uqhubeke watyikitya isivumelwano sakhe sokuqala kunye necala laseFrance ngoJulayi 2010.
ULucas Digne odlalela iLille njengengcali. Ityala lemifanekiso: FMS.
I-Lucas Digne Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Iindaba zokuBamba igama
NgoDigne, uLille wayengengaphezulu nje kokuzalela umhlaba njengoko wayejolise ekuzalisekiseni iphupha lakhe lobuntwana lokudlala kwiParis Saint Germain. Uphuhliso luchaza ukuhamba kwakhe ngokukhawuleza "kwiklabhu yephupha" kwi-2013 emva kokuchitha isizini ezimbini eLille.
I-PSG isayine uLucas Digne ovela eLille kwi2013. Ityala lemifanekiso: Sportskeeda.
Ngelixa kwi-PSG, uDigne wayebonakala ebekelwe ukuba adlulise ixesha kwiibhentshi. Akazange afumane thuba lokuzimela kwiklabhu apho enziwe khona umdlali ongumdlali wasemva ngokufika kwaye waqhele ukuba ngumdlali ongasetyenziswanga kuninzi lwemidlalo yakhe ebalulekileyo esecaleni. Ukuyithwala yonke loo nto, wayebolekiswe kwiRom kwi-2015 / 2016 isizini emva kokuhlala iminyaka emibini kunye neeParisians.
I-Lucas Digne Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ukuphakama Kwigama leNdaba
Nangona uDigne echithe unyaka e-Roma, ukubonakala kwakhe kweklabhu kudlula into awayeyirekhodla kwi-PSG kumaxesha amabini, engazange athathwe njenge-flop e-Barcelona apho afike khona e-2016 kwaye wachitha isizini emibini edlala ecaleni kwebhola yebhola njenge Lionel Messi.
Ukukhawuleza phambili ukuya kuthi ga ngoku, u-Digne udlalela i-Everton FC emva kokusayina kwiklabhu ye-2018. Akukho mathandabuzo onwabileyo kwicala lesiNgesi apho abhale khona uninzi lweenjongo ebomini ngexesha lokubhala. Ezinye, njengoko besitsho, yimbali.
ULucas Digne ukwimo efanelekileyo yokufumana amanqaku kwi-Everton. Imboleko yeMifanekiso: Yeyona.
I-Lucas Digne Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubuhlobo boBomi boBomi
Ukunyuka kukaDigne ngamanqanaba kaLille kuhlala kungumsebenzi kuye kwiminyaka emininzi, ngakumbi kwinto yokuba wadibana nentombazana - uTiziri Digne ngelixesha. Iintombazana ezithandanayo ezazineminyaka emibini ye-16 ngexesha lokudibana kwazo okokuqala, zaba sisibini esingenakuthelekiswa nanto kwaye saqhubeka ukutshata ngoDisemba 2014.
U-Lucas Digne kunye nenkosikazi yakhe baqala njengabaselula. Ityala lemifanekiso: I-Instagram.
UTziri uphakathi kwezinye izinto zokuzilolonga nokuthanda ifashoni ojonge phambili ekwakheni umsebenzi wobuntatheli. Kutshanje ubelethe umntwana wabo wokuqala (unyana) ngo-Epreli 2019 ukuba angenise usapho kwihlabathi elitsha.
UDigne noTiziri babenomntwana wabo wokuqala kunye ngo-Epreli 2019. Ityala lemifanekiso: I-Instagram.
I-Lucas Digne Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi beNtsapho
Kude kude nokuwisa, ukumakisha ngokusondeleyo nokucoca ibhola kwiTofu, usapho lubaluleke kakhulu kwiDigne. Sihamba wena kubomi bosapho bakhe.
Malunga notata kaLucas Digne: UPhilippe nguyise kaDigne. Wayesebenza kwindlu yokushicilela eLizy-Sur-Ourcq kufutshane naseMeaux ngexesha lobomi bokuqala bukaDigne kwaye wayedlalela iqela lokuqala leklabhu yasekhohlo yabadlali abancinci uMareuil-Sur-Ocrcq. Kuyaqhubeka ngaphandle kokuba wathi waba negalelo elikhulu ekubumbeni ukunyuka kukaDigne ebholeni kwaye wadlala indima ebalulekileyo ekukhuleni kwakhe ukuza kuthi ga ngoku.
Malunga noLucas Digne Umama: UKarine ngumama kaDigne. Njengomyeni wakhe kunye noonyana bakhe, umkhulu kwibhola ekhatywayo kwaye wayekhe wakhonza njengonobhala weklabhu yeqela labantwana baseDigne uMareuil-Sur-Ocrcq. Umama onothando wababini ugcina i-tabo kubantwana bakhe ngakumbi u-Digne osandula ukuzisa umzukulwana wakhe wamva nje.
ULucas Digne wakhuliswa ngabazali okwaziwa kancinci ngaye. IiCredits zoMfanekiso: IClipArtStation kunye neFotballWikia.
Malunga nabazala bakaLucas Digne: UDigne unomzalwana ochongwe njengoMathieu. Ubhuti omdala owabelana ibali elifanayo lobuntwana kunye noDigne wayenomsebenzi wakhe wokwakha eLille kodwa akaguquki ekuqeqesheni. Nangona kunjalo, akayeki ukuxhasa uDigne ozibophelele ekwenzeni igama elihle kusapho kwibhola ekhatywayo ephezulu.
Malunga nezihlobo zikaLucas Digne: I-Digne inomakhulu noomakhulu nootatomkhulu bakhe abangaziwayo nangona kungekho ngxelo zababekazi, oomatshana kunye nomtshana. Ngokufanayo, umzala oshiyekileyo ongekazukuchongwa ingakumbi kwizigigaba zobomi bakhe bokuqala kude kube ngumhla.
I-Lucas Digne Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Iinkcukacha zobomi bomntu
Ewe, u-Digne unomdla omkhulu wokuqwalaselwa kwenkundla, bubuntu bakhe obutha intliziyo yakhe nabani na onokudibana naye. Iimpawu ezinomtsalane kaDigne's Persons ezithatha imvelaphi yazo kwiCancer zodiac sign zibandakanya ukubhengezwa kwakhe ngamabhongo, ukubonakalisa ubukrelekrele bemvakalelo kunye nokuzimisela okungagungqiyo.
Izinto anomdla kuzo kunye nezinto azithandayo ziquka ukubona ukubona, ukumamela umculo ngakumbi iR & B kunye neRap. I-Digne ikwaqhubeka nemidlalo ye-tennis kunye ne-basketball kunye nokuchitha ixesha elisemgangathweni nosapho kunye nabahlobo.
Ukubona ngenye yeemfuno zikaLucas Digne. Ityala lemifanekiso: I-Instagram.
I-Lucas Digne Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Lifestyle Facts
Ixabiso lemakethi ye- € 30 yezigidi ngela xesha lokubhala kudityaniswa namava aphantse alishumi ebhola ekhatywayo aseke iDigne kwiligi yabarhola imivuzo ephezulu enomdla omangalisayo.
Uhlala ubomi obumnandi obuhlala bubonakaliswa kwipatheni yakhe yokuchitha, izindlu kunye nokunambitheka okungaqhelekanga kwendawo yokuhlala xa udlala ngaphandle kwelenki yaseFrance. Mhlawumbi eyona nto ichukumisayo yingqokelela yeemoto zakhe ezilawulwa ziimpawu ezifana noFerrari, Mercedes kunye no-Audi.
ULucas Digne obeka ecaleni komnye wabakhweli bakhe beAudi. Ityala lemifanekiso: I-Wtfoot.
I-Lucas Digne Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Inyaniso engekho
Ukurhanelwa nokwazi akufani. Nceda ufumane apha ngezantsi iinyani ezingaziwayo okanye ezingenakuthetha malunga noLucas Digne.
Ukutshaya kunye nokusela: I-Digne ayinayo imbali ngecuba, kwaye ayinikiwanga isiselo ngexesha lokubhala. Endaweni yokuba azame ukuba sempilweni kwaye azimisele nangayiphi na into enokumnciphisa umsebenzi wakhe.
Iitattoos: Une-tattoos ezigqwesileyo ezingalweni kunye namagama aphikisanayo (Andisoze ndihambe ndedwa ') esifubeni sakhe esasiqondwe kakubi ukuba luthando lweLiverpool. Ukubeka irekhodi ngqo kulo mbandela, u-Digne wachaza ukuba yayiyirhafu kubazali bakhe.
I tattoo yesifuba sikaLucas Digne ifundeka "Andisoze ndihambe ndedwa". Ityala lemifanekiso: I-Instagram.
Ukuzibophelela Kwamanye Amazwe: Umdlalo wasekhohlo weqela lesizwe laseFransi kwaye umele onke amanqanaba enza i-U16 ukuya kwinqanaba le-U21. Udlale iFransi ngexesha le-2014 indebe yehlabathi kwaye wayemi elinde iqela laseFrance kwindebe yehlabathi ye-2018.
Inkolo: Akukho nto ingako iyaziwayo malunga nesikhundla sikaDigne kwimiba yokholo, nangona kunjalo, unika i-inkling yokuba likholwa ngokuwela ngokwakhe kumdlalo wokudlala. Inkqubo enjalo ithandwa phakathi kwamaKristu ngokukodwa amaKatolika.
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda ibali lethu leLucas Digne lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
IDayton Football Diary
UTomas Lemar Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Matteo Guendouzi Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Olivier Giroud Ingxelo yabantwana Ingxelo ye-Untold Biography Facts